NL (ခ) ဒီအမောင်: 05/08/12
အရက်စွဲဝေဒနာဖြင့် စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးရုံတက်ရောက်သည့် လူနာများတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာ
Browse › Home › ကျန်းမာရေး » အရက်စွဲဝေဒနာဖြင့် စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးရုံတက်ရောက်သည့် လူနာများတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာ
အရက်စွဲဝေဒနာဖြင့် စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးရုံကြီးသို့ တက်ရောက်ကြသည့် လူနာများတွင် အမျိုးသားများ သာမက အမျိုးသမီးများပါ ပါဝင်မှုရှိလာကြောင်း စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီး(ရန်ကုန်) မှ သတင်းရရှိပါသည်။
စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီးတွင် နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝေဒနာရှင်ပေါင်း ၉၀၀ ကျော် ဆေးဝါးကုသခံယူမှုရှိကြပြီး အရက်စွဲ၊ စိတ်ကြွ၊ စိတ်ကျနှင့် စိတ်ကစဉ့်ကလျား ရောဂါများဖြင့် တက်ရောက်မှုများကြကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ တက်ရောက်ကြရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ ဆေးရုံတက်ရောက် မှုမှာ ဆေးရုံတက်လူနာအားလုံး၏ သုံးပုံတစ်ပုံ ၀န်းကျင်ရှိကာ စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါဖြင့် တက်ရောက်မှုများကြသည်။ ထို့အပြင် ယခုလက် ရှိ၌ စိတ်ဝေဒနာမျိုးစုံဖြင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကြသည့် လူနာများတွင် အရက်စွဲဝေဒနာဖြင့် တက်ရောက်မှု မှာ အခြားဝေဒနာဖြင့် ဆေးရုံတက်ရောက်သူများထက် ပိုမိုနေကာ ယင်း အထဲတွင် အမျိုးသမီးအချို့ပါ ပါဝင် လာကြောင်း၊ ၂၀၀၅ မှ ၂၀၀၈ ထိ လေးနှစ်အတွင်း ဦးရေ ၂၀ ကျော် သာရှိရာမှ ၂၀၁၁ခုနှစ်တစ်နှစ်တာ အတွင်းဦးရေ ၃၀ ကျော် ရှိလာကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ လစဉ်လူနာ အသစ်နှစ်ဦး၊ သုံးဦးပုံမှန် ရှိလာကြောင်း အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၅၀ နှစ်အတွင်း ဖြစ်ကြပြီး အသက် ၃၀ ကျော်သူ များပြားကြောင်း သိရသည်။
Posted by nllamin.com at 4:23 AM
ခုခေတ်ကပိန်ပိန်သွယ်သွယ် မော်ဒယ်ခေတ်ဆိုပေမယ့် အရမ်းကြီးပိန်ကပ်နေလွန်းနေရင်လည်း
ဘယ်လှတော့မလဲနော်။ နဲနဲတော့ ပြည့်ဖြိုးဖြိုးလေး ရှိနေမှပေါ့။ ပြီးတော့ ၀တဲ့သူကသာ ပိန်ချင်ပေမယ့် ပိန်တဲ့သူတွေကတော့ ၀၀ လှလှလေး ဖြစ်ချင်ကြတာ။ ဒီတော့ ၀ချင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
ပိန်တဲ့သူတော်တော်များများက ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားများတဲ့သူတွေ/ အစားနဲတဲ့သူတွေပဲနော်။ ခန္ဓာကိုယ်က စွမ်းအင်ကို သုံးသလောက် ဖြည့်မပေးဘူးဆိုရင် ပိန်လာတော့မှာပေါ့။ အဲဒီတော့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများတဲ့သူတွေဟာ အစားအစာကိုလည်း များများစားပေးဖို့ လိုတယ်နော်။
Aim for three large meals and eat often
လူတွေက စားတဲ့ပုံစံမှားနေတယ်နော်။ မနက်စာကို စားချင်မှစားကြတာ၊ နေ့လည်စာနဲ့ ညစာကိုမှ အသားကုန်စားတာလေ။ တကယ်က တနေ့တာအတွက်လုံလောက်တဲ့ စွမ်းအင်ရဖို့ မနက်စာကိုပဲ သေချာစားရမှာပါ။ ပြီးတော့ နေ့လည်စာကိုလည်း များများစား၊ ညစာကိုတော့ သင့်တော်ရုံစားပါ။ ညစာကို များများစားမယ်ဆိုရင်တော့ ညနေ ၆ နာရီမတိုင်ခင်စားတာ အကောင်းဆုံးပဲနော်။ အိပ်ချိန်နဲ့နီးနေရင် အစာမကြေဖြစ်တတ်တယ်လေ။ တစ်နေ့ကို (၃)ကြိမ်တော့ သေချာစားပေးနော်။ ပြီးတော့ ခဏခဏလည်း စားပေးပါ။
Posted by nllamin.com at 4:22 AM
ရောဂါတွေအများကြီးရှိတဲ့ အထဲကမှ “အသည်းရောင်အသားဝါဘီပိုး” လို့ခေါ်တဲ့ Hepatitis B Virus (HBV) ကို အရမ်းကြောက်ကြတယ်နော်။ ကြောက်လို့ပဲ ပိုးရှိမရှိစစ်ကြ၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးကြနဲ့လေ။ တချိူ့ကလည်း HBV အကြောင်းကိုသိလို့ ကြောက်တာ၊ တချိူ့ကလည်းလူပြောများလို့ သူများတွေ ကြောက်လို့ ကြောက်ကြတာ။ :D HBV က တကယ်လည်း ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ HBV က HIV ပိုးထက်တောင် အဆ ၁၀၀ လောက်ပိုပြီး ကူးစက်နိုင်တယ်လေ။ ကူးစက်ခံရပြီဆိုရင်လည်း ဘာမှမဖြစ်ရင် ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့်.. ဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်း သေနိုင်တယ်လေ။ အဲဒီလောက် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ HBV အကြောင်းကို ပြောပြမယ်နော်။
Posted by nllamin.com at 4:20 AM
ကျွန်တော် မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ်သွားရာကနေ အင်္ဂလန်ကို ပြန်ရောက်ပြီး ရက်ပိုင်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာအများစုလိုပဲ ကိုယ့်မြေသံယောဇဉ်ရှိသူမို့ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းကို မဖတ်တဲ့နေ့ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ နှစ်သစ်ကူးနေ့မှာ Internet သတင်းဖတ်ရင်းနဲ့ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်ရဲ့ သတင်းကို ဖတ်မိလိုက်တော့ မယုံနိုင်အောင်ကိုဖြစ်မိတယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တုန်းက ကျွန်တော်မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ အလုပ်သင်ဆရာဝန် တာဝန်ကျနေတုန်းက ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်ကို ဆုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူ့ရဲ့ညီဖြစ်သူ ဒေါက်တာနေလင်းမောင်က ကျွန်တော်နဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးသူ တစ်ဦးပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ သူနဲ့မဆုံဖြစ်တော့ပေမယ့် သတင်း မီဒီယာတွေမှာ သူ့ရဲ့အကြောင်းတွေ၊ သူ့ရဲ့မိန်ခွန်းတွေ ဖတ်ရပါတယ်။ သူ့အပေါ် အမြင်အမျိုးမျိုးရှိကြပေမယ့် သူဟာတိုင်းပြည်အပေါ်မှာ အင်မတန် စေတနာရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့မရတဲ့ အချက်ပါ။ အသက် ၅၀ ဆိုတာ အတွေ့အကြုံနဲ့ ခွန်အားပေါင်းစပ်ပြီး တိုင်းပြည်အတွက် အများကြီးလုပ်နိုင်တဲ့ အရွယ်ပါပဲ။ ကျန်ရစ်ခဲ့သူ မိသားစုအတွက်ကတော့ အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ရပ်ပါ။
Posted by nllamin.com at 4:14 AM
ပူပြင်းသော ရာသီအတွင်း အရက်၊ ဘီယာ သောက်သုံးခြင်းက ဦးနှောက်ဆိုင်ရာရောဂါများကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်
ပူပြင်းသော ရာသီတွင် အရက်၊ ဘီယာများသောက်သုံးခြင်းသည် ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့်အတွက် အရက်၊ဘီယာများ သောက်သုံးခြင်းကို ရှောင်သင့်ကြောင်း ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများက ဆိုသည်။
“ အရက်တွေ ဘီယာတွေက ခန္ဒာကိုယ်တွင်းကို ပူစေပါတယ်။ အရက်သေစာသောက်စားထားတဲ့အထဲ ရာသီအပူချိန်တွေမြင့်တက်လာပြီး ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်တာတွေ၊ ဦးနှောက်ရောင် ရမ်းတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့် တတ်နိုင်ရင် ပူပြင်းတဲ့နေ့လည်ပိုင်းအချိန်မှာအရက်သေစာ တွေကို သောက်စားပြီး ရေပက်ခံမထွက်သင့်ပါဘူး” ဟုဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမှအထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန် ဒေါ်စန်းသီတာအောင်က ပြောသည်။
Posted by nllamin.com at 4:11 AM
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အငြင်းပွားမှု ကြောင့် ဒုသမ္မတနုတ်ထွက်
လက်ရှိအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ သဘောထားတင်းမာသူလို့ နံမယ်ကြီးတဲ့ ဒုသမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး ရာထူးကနေ နှုတ်ထွက်သွားကြောင်း မေလ (၇) ရက်နေ့ ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့ Asian News International သတင်းမှာ ရေး သားထားပါတယ်။ အသက် ၆၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ဥိးတင်အောင်မြင့်ဥိးဟာ သမ္မတဥိးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်တဲ့ လက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်လိုသူတွေနဲ့ သဘောထားတင်းမာသူတွေအကြား အငြင်းပွားမှု ကြောင့် အခုလို နှုတ်ထွက်သွားတာလို့ သတင်းမှာ ရေးထားပါတယ်။
Posted by nllamin.com at 3:42 AM
ဒုတိယ သမ္မတ တစ်ဦးဦး နှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်
နှုတ်ထွက်စာတင်ထားသည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်နေသည့် ဒုသမ္မတဦးတင်အောင်မြင့်ဦး
ပုဒ်မ ၇၃(စ) ။ ။ ဒုတိယသမ္မတ တစ်ဦးဦးသည် ရာထူးသက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ နှုတ်ထွက်သောကြောင့် ဖြစ်စေ၊ ကွယ်လွန်သောကြောင့် ဖြစ်စေ၊ ထာဝစဉ် မစွမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်စေ ဒုတိယသမ္မတ ရာထူးနေရာ လစ်လပ်လျှင် ပြည်ထောင်စု အစည်းအဝေး ကျင်းပချိန် ဖြစ်ပါက ယင်းဒုတိယ သမ္မတကို ရွေးချယ်တင်မြှောက် ပေးခဲ့သော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့က ခုနှစ်ရက် အတွင်း ဒုတိယသမ္မတ တစ်ဦး ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပေးရေး အတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အကြီးအမှူးထံ ဆောလျင်စွာ အကြောင်းကြားရမည်။
Posted by nllamin.com at 3:40 AM
ဒုတိယ သမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နှုတ်ထွက်ပြီ -Hardline Myanmar vice president resigns, says report
ဒုတိယ သမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး ကျန်းမာရေးကြောင့် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သွားပြီပာု Reuters သတင်းဌာန၏ သတင်းအရ သိရှိရသည်။
စင်္ကာပူ နိုင်ငံမှ ဆေးကုသခံယူပြီးအပြန် ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ရာထူးမှ အနားယူလို ကြောင်း မေလ ( ၃ ) ရက်နေ့ကထဲက..သက်ဆိုင်ရာသို့တင်ထားကြောင်းလည်း သိရပါသည်။
Myanmar's Vice President Tin Aung Myint Oo sprinkles fragrant water ataplaque during the opening ceremony ofachildren's hospital in Yangon March 13, 2011.
YANGON (Reuters) - A former top general close to Myanmar's retired dictator Than Shwe has resigned as vice-president, Burmese media reported, ending the hardliner's role in the reformist government.
Posted by nllamin.com at 3:38 AM
နိုင်ငံကူးလတ်မှတ်အတု ကိုင်ဆောင်သူ မြန်မာနိုင်ငံသူနှစ်ဦး ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိ
မလေးရှားနိုင်ငံမှ မြန်မာ နိုင်ငံသူနှစ်ဦး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတုများ ဖြင့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း အဆိုပါလေဆိပ်မှ စုံ စမ်း သိရသည်။
ဧပြီ ၂၉ ရက် နံနက်၁၁နာရီက မလေး လေကြောင်းလိုင်းခရီးစဉ် အမှတ် MH-740 ဖြင့်လိုက်ပါလာသော မငြိမ်းငြိမ်း (၃၁)နှစ်နှင့် မသက်ထွေး(၁၉)နှစ်တို့နှစ်ဦး သည် အခြားသူများ၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် များကို ပြုပြင်ကိုင် ဆောင်လာကြောင်း ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် စုံစမ်းတွေ့ ရှိရသဖြင့် ၄င်းတို့အား လေဆိပ်စစ် ဆင်ရေး အဖွဲ့ (၁)မှ မင်္ဂလာဒုံရဲစခန်းသို့ တရားလို ပြုလုပ်တိုင်တန်းခဲ့သည်။
''သူတို့နှစ်ဦးက ကရင်ပြည်နယ် ဘက်က၊ တစ်ဦးက မုဒုံ၊ တစ်ဦးက ဇင်း ကျိုက်မှာနေတာ။ မလေးနိုင်ငံကနေ အလုပ် လုပ်ပြီး ပြန်လာကြတာလို့တော့ လောလော ဆယ်သိထားရတယ်။ အသေးစိတ်တွေကို တော့ စုံစမ်း နေတုန်း ပဲ။ လိမ်လည်မှုအပြင် လဝကအက်ဥပဒေနဲ့ပါ အရေးယူမှာပါ'' ဟု ယင်းအမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့် ရဲအရာရှိတစ်ဦး က ပြောသည်။
Posted by nllamin.com at 3:35 AM
နာရေးကူညီမှုအသင်းကို အမေရိကန်ရောက် မြန်မာတွေ ဒေါ်လာငွေ ခြောက်သောင်း လှူဒါန်း
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို ရောက်နေတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း ဦးဆောင်သူ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ အကယ်ဒမီ ကျော်သူနဲ့ဇနီး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်တို့ကို ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ပြည်တွင်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဒေါ်လာငွေ ၆ သောင်းခန့် လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။
ခရီးစဉ်အတွင်း အခုလိုအလှူငွေကောက်ခံဖို့ အစီအစဉ် မရှိခဲ့ပေမယ့် အမေရိကန်ရောက် မြန်မာတွေက ပြည်တွင်းမှာ အကူအညီ လိုအပ်နေသူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး စိတ်စေတနာနဲ့ ၀ိုင်းဝန်း လှူဒါန်းကြတဲ့အတွက် အားတက်မိကြောင်း ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်က အခုလို ပြောပါတယ်။
Posted by nllamin.com at 1:32 AM
အမျိုးသမီးတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ရပ်တန့်ရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက် အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ရပ်တန့်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မနေ့က စတင်တဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေး နိုင်ငံတကာ လှုပ်ရှားမှုအတွက် ပေးပို့တဲ့ ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုသွားပါတယ်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်က ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင်အဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရွေးချယ် ဆုချီးမြင့်ကြောင်း နိုဘယ်လ်ဆုအဖွဲ့၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားပုံ။
အကြောက်တရားတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအပေါ် မတရားပြုကျင့်မှုနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ရပ်တန့်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့် နိုင်ငံတကာမှာ ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးထု တရပ်လုံးဆီ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ကျွန်မတို့အားလုံး ဆောင်ကြဉ်းပေးကြပါစို့လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
Posted by nllamin.com at 1:08 AM
Posted by nllamin.com at 1:06 AM
ဌာနတိုင်းတွင် သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီးဟုဆို
နေပြည်တော် အခြေစိုက်အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာများတွင် မီဒီယာများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းပြီးဖြစ် ကြောင်း ယခုလ ၁၄ ရက်က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီးကိုကိုက ပြောကြားသည်။
"ကျွန်တော်တို့ ဌာနမှာလည်း သတင်း ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒုတိယ၀န်ကြီးက ဦးဆောင်ပါတယ်" ဟု ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုက ပြောသည်။
ထို့ပြင် ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးတွင် လည်း ဆိုင်ရာသတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by nllamin.com at 12:34 AM
ဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်မှု မြန်မာနိုင်ငံ နံပါတ် ၇ နေရာမှာရှိနေ
စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်မှု အဆိုးဝါးဆုံးထိပ်ပိုင်း ၁၀ နိုင်ငံစာရင်း ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ နံပါတ် ၇ နေရာမှာ ရှိနေကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးရောက်မြို့ အခြေစိုက် CPJ စာနယ်ဇင်း သမားများ ကာကွယ်ရေး ကော်မီတီက ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာ က ဖေါ်ပြလိုက် ပါတယ်။
သတင်းမီဒီယာ နဲ့ စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်မှု အနည်းဆုံး လေး နိုင်ငံကတော့ Eriteria (အီရစ်တြီးယား)၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ ဆီးရီးယား နဲ့ အီရန်နိုင်ငံတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရင်တုန်းက CPJ အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းမှာ နံပါတ် ၂ နေရာမှာ ရှိနေခဲ့ရာက အခုဆိုရင် နံပါတ် ၇ နေရာ မှာ ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ အတွက် ပြည်ပ အခြေစိုက် မြန်မာသတင်း စာမျက်နှာတွေ မှာ ဖျက်တောက် မှုများ လျော့နည်းလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Posted by nllamin.com at 12:31 AM
ဆေးရွက်ကြီးပါသည့် ကွမ်းစားသုံးမှု အများဆုံးနိုင်ငံများတွင် မြန်မာနိုဆေးရွက်ကြီးပါသည့် ကွမ်းစားသုံးမှု အများဆုံးနိုင်ငံများတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိပ်ဆုံး၌ ရပ်တည်နေကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၏ စစ်တမ်းအရ သိရ...
Posted by nllamin.com at 12:02 AM
Posted by nllamin.com at 12:00 AM
အရက်စွဲဝေဒနာဖြင့် စိတ်ကျန်းမာရေး ဆေးရုံတက်ရောက်သည်...
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အငြင်းပွားမှု ကြောင့် ဒုသမ္မတနု...
ဒုတိယ သမ္မတ တစ်ဦးဦး နှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေ...
ဒုတိယ သမ္မတ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး နှုတ်ထွက်ပြီ -Hardli...
နိုင်ငံကူးလတ်မှတ်အတု ကိုင်ဆောင်သူ မြန်မာနိုင်ငံသူန...
နာရေးကူညီမှုအသင်းကို အမေရိကန်ရောက် မြန်မာတွေ ဒေါ်လာေ...
အမျိုးသမီးတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ရပ်တန့်ရေး ဒေါ်အောင်ဆ...
ကျွန်ဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာတွေကို နွံနစ်အောင်လုပ်ရက်သလား...